Guddigu wuxuu tixgeliyaa shuruudaha maaskaro preK-8 | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Agoosto 12 , 2021
Xubnaha guddiga dugsigu waxay ka fiirsanayaan talinta maamulka si loogu baahdo maaskaro gudaha ah dhammaan dadka ku jira goobta dugsiga (preK ilaa fasalka 8) oo ay ku jiraan shaqaalaha, ardayda iyo booqdayaasha, iyadoon loo eegin heerka tallaalka. Daboolista wejiga ayaa si joogto ah loogu talin doonaa dhammaan shaqaalaha, ardayda iyo booqdayaasha dugsiga sare, barnaamijka ALC iyo Kala -guurka iyo Dhismaha Adeegyada Dhexe.
Guddiga dugsiga ayaa la filayaa inay u codeeyaan habraacyadan badbaadada inta lagu jiro kulanka guddiga dugsiga ee 26ka Ogosto (isbeddelka taariikhda xusuus qorka). Haddii la oggolaado, shardiga duubistu wuxuu dhaqan galayaa Isniinta, Ogosto 30.
Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC) iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH) labaduba waxay ku taliyeen maaskaro guud ee dugsiyada. Ahmiyadda degmadu waa inay dugsiyadu furnaadaan si shaqaalaha iyo ardaydu ay u sii wataan waxbaridda iyo wax barashada maamulkuna wuxuu rumaysan yahay inay tallaabadani xaddidi doonto fiditaanka COVID-19 iyo cudurrada kale ee dugsiyadeenna.
Iyada oo maaskaro caalami ahi ay timaaddo fursad lagu xaddido karantiilinta ardayda. Haddii ardaygu aad ugu dhow yahay oo uu xidhnaa maaskaro ama la tallaalay, tilmaanta MDH waxay sheegaysaa inaysan u baahnayn inay karantiiliyaan. Dhammaan xiriirada dhow waxaa la ogeysiin doonaa suurtogalnimada soo -qaadista iyo kuwa buuxiya shuruudahan waxaa laga codsan doonaa inay si dhow ula socdaan astaamo kasta.
Baro wax badan oo ku saabsan nidaamka badbaadada COVID-19 ee sanad dugsiyeedka 2021-2022.
Xaaladda ku xeeran COVID-19 si joogto ah ayay isu beddelaysaa oo mas'uuliyiinta degmadu waxay sii wadi doonaan inay kormeeraan oo ay hagaajiyaan borotokoollada iyagoo ka jawaabaya macluumaadka ugu dambeeyay ee la heli karo.